Izindaba - Q shintsha umshini wokususa i-tattoo laser
Q shintsha umshini wokususa i-tattoo we-laser
Abantu abaningi bathola ama-tattoo ngenhloso yemfashini, kepha bafuna ukuwasusa ngemuva kwesikhashana. Kuma-salon wobuhle, ukususa i-tattoo sekuyimakethe entsha. Ngabe i-Q ingashintsha imishini ye-laser kuma-salon wobuhle isuse ama-tattoos?
Amandla laser kungaba 250W, 500W, noma ngisho nangaphezulu.
Umshini wokususa i-tattoo kumele usebenzise umgodi omkhulu. Inokumiswa okuphezulu, okukhiphayo okuqinile, umsebenzi oqhubekayo nempilo ende yokusebenza. Amandla kagesi ahlukaniswe ngaphambi komlilo nangaphambi kokushisa. Ukukhishwa kwamandla kagesi wangaphambi komlilo kuphansi, okuthinta impilo yezinsimbi zomgodi futhi akuzinzile, futhi kuthanda ukuba nezinkinga. Ngokuvamile, umshini omuhle wokususa i-tattoo kufanele ube namandla afakwa ngaphambi kokushiswa kanye nomgodi omkhulu we-laser.
Lapho ususa amashiya, kufanele abe mancane ngangokunokwenzeka, ngoba lokhu akuyona ukugeza okukodwa, futhi isikhawu esiphakathi kokugeza kwesibili side ngokwedlulele, ngoba isikhumba sidinga inqubo ende yokwenziwa komzimba, ngakho-ke kufanele uqale ukwenze ngaphambi ukuyinikeza ikhasimende. Ukucaca, akukhona ukuthi banyamalala ngokushesha ngemuva kokuwashwa.
Izinyathelo zokuphepha zokususwa kwe-laser tattoo:
1. Isikhumba kufanele somile kungakapheli izinsuku ezintathu ngemuva kokususwa kwe-laser tattoo, kungabi namanzi, kungabikho makeup noma ukugcotshwa.
2. Ngemuva kokususwa kwe-laser tattoo, naka inhlanzeko nenhlanzeko. Uma kwenzeka amabhamuza, akufanele ahlatshwe ngokuthanda, futhi kufanele avunyelwe ukuzithoba ngokwawo.
3. Ngesikhathi sokukhishwa kwe-laser tattoo, i-anti-ointment noma umuthi womlomo ungasetshenziswa ukuvimbela ukwenzeka kwesibili.
4. Ngemuva kokususwa kwe-laser tattoo, kufanele unake ukuvimbela. I-pigmentation iyinqubo ye-biological ehamba kancane, imvamisa izinyanga ezi-1 kuye kwezi-2.5. Ngalesi sikhathi, kufanele unake ukuvezwa yilanga.
5. Ngaphambi kokuwa koqweqwe, ingxenye yokusebenza akufanele ivezwe emanzini, ukwakheka, ukugcotshwa, ukugwema okubabayo, ukubhema notshwala. Esikhathini esizayo esiseduze, ukudla okusheshayo okunemibala emnyama njengekhofi, i-Pepsi, njll., Ukuvumela uqweqwe luziwele lodwa, futhi ungalususi ngenkani.